Akwụkwọ akụkọ na-aga n'ihu igbu onwe ha n'ụzọ na-enweghị isi | Martech Zone
Site na Ruth blọgụ, emechara m ịgụ otu akwụkwọ akụkọ New York Times na Tribune na-eme atụmatụ iwepụ peeji 500 site na 12 nke akwụkwọ akụkọ kachasị ukwuu kwa izu.
Akwụkwọ akụkọ = Akwụkwọ mposi
Apụghị m ọbụna ịgwa gị otú ara iwe a na-eme ka m… na, dị ka ọkụ eletrik, ị kwesịrị ị na-enwe oké iwe nakwa. O yiri ka Industrylọ Ọrụ Akwụkwọ akụkọ, na amamihe na-adịghị agwụ agwụ ọ na-ebelata ugbu a, na-agbaso ụzọ nke ụlọ ọrụ akwụkwọ mposi na-agbaso. Ha na-ere obere mpempe akwụkwọ maka ego ọzọ n'oge a.
Nsogbu a bụ na agwa ndị mmadụ banyere ụlọ mposi agbanwebeghị, mana etu ha si agụ ihe agbanwebela. Companieslọ ọrụ akwụkwọ mposi nwere ike ịpụ na mpịakọta na-ada ụda maka otu ọnụahịa ahụ - anyị ka kwesịrị ịzụta ha. Ọ bụghị otú ahụ maka akwụkwọ akụkọ.
Mbelata ogo ngwaahịa gị adịghị mkpa
Afọ 15 gara aga, arụrụ m ọrụ maka Virginian-Pilot na anyị mere ọtụtụ nyocha nke ngwa ntinye dị ike yana ụfọdụ usoro obibi akwụkwọ obibi mgbagwoju anya. Teknụzụ, n'oge ahụ, emeghị ka ọ bụrụ ihe na-akwụghachi ụgwọ iji wuo akwụkwọ akụkọ nke ọma ma ọ bụghị nye teknụzụ iji wuo akwụkwọ akụkọ ezubere iche maka ezinụlọ.
Ọnwa ole na ole gara aga, m na-enyere Scott Whitlock aka na blọọgụ ya ma kpọrọ m gaa njem nke ụlọ ọrụ ya, Ntughari Flexware. O gosiputara m uzo igwe na-adọrọ adọrọ nke laser nke ha na-emepe nke nwere oke ọsọ na nnabata, ọ bụghị n'adịghị ka a na-ebi akwụkwọ ma ọ bụ igwe ntinye.
Creatmepụta otu ụlọ nwere ike ịbụ uru maka akwụkwọ akụkọ ebe ọ bụ na ha nwere ike ịnye atụmatụ ezubere maka ezinụlọ dabere na nhọrọ ndị mmadụ. N'aka ozo, obere mgbasa ozi = karia nbata. A Best Buy nwere ike belata nkesa ya na ọkara mana kụọ ezinụlọ ọ bụla nwere mmasị na ngalaba teknụzụ. Hà ga-adị njikere igbasa nkesa ha na mpempe akwụkwọ na-efu 50% mana kwụọ ụgwọ 10% ọzọ maka ezubere iche? Uh… yea… ọ ga-azọpụta ha nde!
Tohapụ ikwu na nke a nwere ike iduga n'akwụkwọ akụkọ ọbụla na asọmpi na United States Postal Service.
Enweghị m ike iche na taa na afọ, na ọ gaghị ekwe omume ibipụta ngalaba gị ma mepụta akwụkwọ akụkọ dabere na arịrịọ ezinụlọ. Cheedị otú ọ ga-esi dị mfe iwepụ ọtụtụ puku peeji site na akwụkwọ akụkọ gị ma ọ bụrụ na ịnweghị ngalaba nke ị na-enweghị mmasị na ya! Ọ bụrụ na m abanyeghị na egwuregwu ma ọ bụ echiche nke ibe akwụkwọ akụkọ, belata ha!
Ọzọkwa, nhazi ụgbọ mmiri na nnyefe ga-eme ka ị hụ na akwụkwọ akụkọ na-aga n'ọnụ ụzọ ọ bụla ka ọ bụrụ nke ziri ezi karị! Onye na-ebu ụgbọ mmiri agaghị achọ ile tebụl na-agagharị, ha na-ewepụta akwụkwọ akụkọ na-esote ma tụba ya n'ọnụ ụzọ ahụ.
Nsogbu dị na nke a, n'ezie, ọ bụghị dị ka mfe dị ka ịtụfu ụyọkọ peeji na ndị ọrụ bara uru na-eso. Ọ chọrọ ngbanwe nke usoro yana itinye ego dị ukwuu na mbipụta na nkesa dị mkpa, ikekwe ọtụtụ narị nde dollar. Nke ahụ gbadara oke oke 40%.
Ozi Sam Zell doro anya - ọ nweghị okwukwe na ụlọ ọrụ ya ịgbanwe ma ọ bụ weghachi. Rịba ama ndị nwere akụ - tụfuo ya.
Tags: a2atụmatụ facebookulo ncharammekọrịta